आक्षेप खेपिरहेका हङकङेली नेपाली संस्थाका गज्जबको काम | watchdognepal
May 11, 2013 · by watchdognepal	· in Overseas Nepalese.	·
तर अचम्म ! यहि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले संस्थाहरुले ‘तँ भन्दा म के कम’ भन्दै तछाडमछाड गर्दे यहाँबाट स्वदेशका लागि गज्जबको काम गरिरहेका रहेछन् ।
यी त ठूला र बलिया संस्थाका कुरा भए । धरानको एउटा वडास्तरको समिति चौकीबारी समाजले त्यहाँ बाल उद्यान बनाउन सन २००४ तिर ३ लाख सहयोग गरेकोथियो । यहि संस्थाको पहलमा निकट भविष्मै बृद्धहरुका निम्ति पनि पार्क बनाउने योजना सहित धरान बृत्तचित्र बनाई आर्थिक संकलन गरिरहेको बताइन्छ । त्यसैगरि ब्यक्तिगत प्रयासमा पनि परोपकार कार्य गरिदै आइएकोछ । संगीतकार दिनेश सुब्बा र शिक्षा क्षेत्रका धन थापाले एउटा साँगितिक कार्यक्रम गरि धरान स्थित नेत्रविहिन विद्यालयलाई एम्बुलेन्स सहयोग गरेको धेरै भएकोछैन । एक सामूदययिक नेताको भनाईमा हङकङका नेपालीहरुले आफ्नो ठाँउमा सहयोग गर्ने भनेपछि दिल खोलेर सहयोग गर्ने गरेकाछन् । उनका अनुसार, यहाँबाट दलका भातृसंस्थाले महिनै पिच्छे पैसा उठाएर लग्ने गरेकाछन् । नेता, कलाकार बोलाउदा गोजीबाटै उठाइन्छ । प्रकृतिक र गरिवी विपत्ति भन्दै दिनहू जसो चन्दा उठाइने गरिन्छ । विभिन्न सहयोगार्थ भन्दै गरिने साँस्कृतिक कार्यक्रममा महगो टिकट नलिई धर हुँदैन । अर्थात, नोकरीबाट महिनाको एकपटक तबल थाप्ने नेपाली कामदारले प्रायश दिनहू जसो स्वदेशमा सहयोग राशि बाँडिरहेको हुन्छ ।
परोपकार गरेबात सम्मान गरेर हौसला दिने एनआरएन हङकङले आफु स्वंयले समेत त्यसो गरेर देखाउने गरेकोछ । एनआरएन हङकङले सुदुर पश्चिमको विद्यार्थीका लागि कर्णालीमा ३ लाख बराबरको अक्षयकोष खडा गरिदिएकोछ । कोशी बाढी पिडितलाई १० लाख उठाइदिएकोथियो । काठमाण्डु एयरपोर्टमा २०० ट्रली दिएकोछ । देवघाट स्थित अनाथालयलाई १५ हजार यूएस डलर रकम पठाएकोछ । लमजुङमा ५ लाख बराबरको सडक निर्माण गरिदिएकोछ । साउदीमा मृत्युदण्ड पाएकि तर हाल बच्न सफल डोमा शेर्पा बचाउन थालिएको अभियानमा ५५ हजार हङकङ डलर सहयोग जुटाइदिएकोथियो । गत महिना एनआरएन भवन बनाउन यहाँका ब्यावसायी जेएन ज्ञवालीले १० लाख, कृष्ण पाण्डेले ५ र त्रिलोक गुरुङले ३ लाख सहयोग गरेकाथिए । एनआरएन र नेपाली महासंघ हङकङले स्वदेशमा मात्र हैन जापान र चीनको भूकम्पमा परि बेसहारा भएकाहरुलाई लाखौ सहयोग जुटाइदिएकाछन् ।
नेपाली संस्थाका केहि नेताले हङकङमै आइडी लिएर बसोबास गर्ने नेपालीले किन अरबमा काम गर्ने नेपालीले जसरी देशमा सहयोग पठाउनु परयो रु यहि आफ्नै संस्था बलियो बनाउन लागौ न भन्ने जिकिर गर्न थालेको बताइन्छ । तर त्यस्ता आवाज बलियो छैन । जता गएपनि जहाँ रहेपनि आफ्नो मातृभूमीको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै हङकङका नेपालीमा ब्याप्त देखिन्छ । यो हिसाबले यहाँ च्याऊ सरह उम्रिएका संस्थाको उपादेयता प्रष्ट देखिन्छ । हङकङेली नेपाली समाजका अन्य पाटा नराम्रा होलान्, छन् पनि तर यो पक्ष भने स्यालुटयोग्य छ ।
Created on Wednesday, 08 February 2012 09:24 ( source: http://rajyasatta.com/analysis/2694-2012-02-08-09-24-17)
← खिलराज प्रकरण ः बाहुन राजाको खोजी !
JB Pun kidnapped ! →